Arday kaqalin jebisay jaamacada SIMAD. Daawo Video - iftineducation.com
iftineducation.com – Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay Arday ka qalin jebisay Jaamacada Simad ayaa maanta ka dhacday Hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho, waxaana Munaasabad aka qeyb galay Maamulka sare ee Jaamacada SIMAD, Macalimiinta Jaamacadaha Muqdisho, Qeybaha bulshada iyo waalidiinta.
Munaasabadan oo aheyd qalin jebinta 650 Arday oo dufcadii 8aad ayaa waxaa hadalo ka jeediyay Maamulka Jaamacada Simad iyo marti sharafkii lagu casuumay, iyagoo ka hadlay duruufaha ay soo mareen ardayda mudadii afarta sano.
Gudoomiyaha Jaamacada Simad C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in Simad la aas aasay sanadkii 1999-kii, xilligaasoo uu ku bilowday Machad, waxaana uu tilmaamay in sanadkii 2011-kii loo bedelay Jaamacad, isagoo ardaydan qalin jebisay sheegay inay nasiib u yeesheen inay noqdaan ardaydii u horeeyay ee Jaamacada markii loo bedelay ka qalin jebiyay.
Waxaa uu hambalyo u diray Ardayda 650-ka ee ka qalin jebisay labo kulyadood, waxaana uu kula dar daarmay inay shacabka Soomaaliyed ay hormariyaan, isla markaana aanay ka qeyb qaadan dumintooda.
“Waa maalin weyn oo aan u dabaal dageyno, 650-ka arday ee maanta qalin jebisay waxay afar sano soo mareen duruufo aad u adag, waxaan ugu tahniyadeynaynaa sida ay u dhabar adeegeen in wadankan oo xaaladiisa adag tahay inay maanta qalin jebiyaan”ayuu yiri Gudoomiyaha Jaamacada Simad.
Sidoo kale waxaa uu Gudoomiyuhu sheegay in Simad ay tan iyo sanadii 2006-dii ku guuleystay in 55-arday oo ka qalin jebisay ay soo qaatee shaadada PHD iyo Master, isla markaana haatan ay yihiin macalimiin isagoo tilmaamay in macalimiinta jaamacada wax ka dhigi doonta jaamacada sanadka 2017 ay rajeynayaan inay noqdaan 60% inay heystaan darajada PHD halka 40% ay noqdaan kuwo Masters ah.
Waxaa uu sheegay in Jaamacada ay taakuleeyaan Hey’ado qaar, isagoo ka xusay Wakaalada Muslimiinta Afrika, oo uu xusay inay horay xarunta jaamacada u dhistay, waxaana uu xusay in dhowaan dhismo cusub ay jaamacada ka furan doonto duleedka Muqdisho, kaasoo lagu baran doono maadada Caafimaadka.
Maamulka sare ee Jaamacada ayaa abaal mariyay 18-arday oo mid ka mid ay aheyd gabar, kuwaasoo darajadaha ugu sareeya ka galay labada kulyadood, waxaana lagu abaal mariyay min Computer Desktop ah, iyadoo Wakaalada Muslimiinta Afrika ay gabadha kaliya ee ugu sareeya 18-ka arday ku jirtay ay ugu deeqday Minxo waxbarasho Master ah oo ay ku soo diyaarin doonto dalka Malaysia.
Sidoo kale saddexda Arday ee ugu sareeyay dhibacaha labada kulyadood ayaa Ardayga koowaad waxaa uu deeq waxbarasho oo Master ah oo ku baxeysa 15-kun doolar siisay Shirkada Xawaalada Jubba Expresss, iyadoo uu soo diyaarin doono taqasuska BA, sidoo kale labada Arday kale ayaa Jaamacada Simad balan qaaday inay bixineyso qarashaadka ku baxaya taqasusaadka Masterka dalka Malaysia oo ku bixi doona 4-kun doolarka Mareykanka.
Ugu dambeyn 650-ka arday ee ka qalin jebisay jaamacada ayaa wajiyadooda ka muuqatay farxad aad u sareysay, waxaana munaasabadan oo aheyd mid aad u sareysay qaban qaabadeeda ayaa waxaa Hobalada deegaan ay ku soo bandhigeen suugaano kala duwan oo ay ka mid aheyd hees ka hadleysay waxbarashada iyo doorka Jaamacada Simad oo qeyb libaax leh ka qaadatay waxbarashada dalka.
HaLkaan Ka Daawo Video ga
Rihanna oo soo bandhigtay sawir ay dhunkaneeyso Chris Brown sheegtayna inay deyn karin